Tena ao anatin'ny 1% -n'ny LinkedIn ve ianao? | Martech Zone
Alatsinainy 11 Febroary 2013 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Nomery. Indraindray dia entin'izy ireo tanteraka aho. Ohatra tsara androany. LinkedIn dia namoaka mailaka miarahaba ireo mpikambana ao aminy izay ao amin'ny isan-jaton'ny mombamomba azy ireo nojerena. Ity ny lakile… profiles nijery. Toy izao ilay mailaka… fiderana nataon'ny namana Daren Tomey:
Daren dia mpamadika entana mafy ary ao amin'ny klioba 1% an'ny mpitantana varotra manerana ny firenena. Tsy hesoriko aminy izany. Ny fanontaniana dia hoe maninona no ny profil'i Daren no iray amin'ireo be mpijery? Ary ahoana no ahafahanao miditra amin'ny klioba 1 isan-jato?
Ny antsasaky ny fitoviana dia tsotra, ny sasany kosa sarotra.
Voalohany, i Daren dia miadidy ny varotra ao amin'ny Zmags - an sehatra famoahana nomerika (sy ny mpanjifa). Masiaka ny varotra. Avo ny fihodinana ary misy hatrany ny orinasa mijery ho an'ny talenta. Ny lakile eto dia mijery. Mijery = fomba fijery. Noho izany, apetraho ao amin'ny piraofilinao ny fitantanana ny varotra na ny mpitantana ny varotra dia ho tonga tampoka ianao. Ao anatin'ny tamba-jotra misy ahy, ny ankamaroan'ny isan-jato ambony dia amin'ny varotra.
Faharoa, miasa mafy amin'ny fampifandraisana amin'ny LinkedIn. Daren dia mahafantatra momba ny olona rehetra ao amin'ny firenena isaky ny orinasa lehibe rehetra. Tambajotra tsy mampino izy ary manana fifandraisana an-taonina. Izy dia hajaina amin'ny indostrian'ny rindrambaiko sy ny haitao ary iza ireo mpitarika ny varotra. ny fifandraisana bebe kokoa, ny tsara kokoa azo inoana fa jerena ny mombamomba azy.
Buzzfeed dia nanao asa tsara mamaky ny isa ary mitsikera araka ny tokony ho izy ny fizarana manaraka izay nitranga nanerana ny tranonkala sosialy. Ity fampielezan-kevitra ity dia varotra… nitazomana ny olona hizara ny marika LinkedIn - izay miharihary amin'ny fifandraisana ivelany.
Ity no karazana fampielezan-kevitra izay mitondra ahy ho voa. Ny isan-jato dia isa mahatsikaiky izay tsy misy dikany… tena tsy misy. Raha superstar eo amin'ny sehatry ny sainao ianao izay mifantina izay hifandraisanao amin'ny LinkedIn dia tsy nahazo iray tamin'ireo mailaka ireo ianao. Fa raha ao amin'ny indostria manana fandraisana mpiasa mavesatra ianao miaraka amina tambajotra lehibe… ary tsy faly amin'ny asanao ianao… dia mbola nahazo iray tamin'ireo mailaka ireo
Ho voaozona ny laza ratsy, ariana ny fankatoavana… lazao fotsiny amin'ny olona iray fa miavaka izy ireo mba hizara izany. Ary niasa tsy nisy kilema.
Mampahatsiahy ahy ny iray amin'ireo T-shirt misy ahy: Manokana ianao. Toy ny olon-drehetra ihany.
Tags: fahefanaLinkedInmailaka mirohyisa
11 Mey 2013 tamin'ny 5:49 hariva
Doug sombin-javatra mahafinaritra ary nieritreritra ny handrisika na dia eo aza ity fampielezan-kevitra ity dia zaridaina - izay tanjony hahatonga ny olona amin'ity 1% na 5% na 10% eritreretina ity - hmmm Mazava ho azy fa mahaliana kokoa noho ny noeritreretiko 🙂 angamba tiako ho fantatra hoe iza mijery ny mombamomba ahy? Ary Ho an'ny $ 16 (na mihoatra fotsiny) - azoko fantarina.
Mahaliana raha fantatrao hoe firy ny fisoratana anarana premium azony 🙂
11 Mey 2013 tamin'ny 11:19 hariva
Fanontaniana tsara, Duncan!
11 Mey 2013 tamin'ny 6:07 hariva
Misaotra anao nanamarina an'ity. Ny 5% no nampiahiahy ahy. Izaho dia semi-activite, saingy tsy ampy hiantohana ny hahavon'ny tampon'ny tampony. Duncan dia manana teboka tsara etsy ambany - manontany tena aho hoe firy ny vidiny lafo vokatr'izany?
11 Mey 2013 tamin'ny 6:36 hariva
Ilay zavatra genius momba an'io? Tsy nahalala na inona na inona momba an'io aho mandra-pamaky azy io teto Doug - na tsia na tsia, dia nety.
12 Mey 2013 tamin'ny 12:18 hariva
Nahavita izany. Misento kosa izy.
12 Mey 2013 tamin'ny 12:43 hariva
Nahazo iray koa aho androany maraina. Heveriko fa manampy koa ny lisitra eo akaikin'ny fandefasana asa.
12 Feb 2013 tamin'ny 11:20 maraina
Douglas, lahatsoratra mahafinaritra. Raha vantany vao nahazo ilay 5% aho dia nieritreritra hoe “iray amin'ny 10M… tsy dia manokana loatra.) Nanaiky hizara izany tao amin'ny LinkedIn (ihany); saingy tsy nandoa ny serivisy premium aho hahitako ny antsipiriany bebe kokoa. Angamba tokony hampiasa ity fizarana fanehoan-kevitra ity ianao raha hijery izay fihetsika hafa ananan'ny olona…
12 Mey 2013 tamin'ny 12:48 hariva
Tongasoa tanteraka ireo hevitra momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra na tsia. Ny vinavinako dia satria, satria bainga sy hafatra fampandehanana fomba, dia tsy nety. Na dia nahaliana iray taonina aza izany.
12 Feb 2013 tamin'ny 11:23 maraina
Ny eritreritro marina. Naheno aho fa na ny polisy efa nanao ny «copie copie, copie ratsy» aza nandritra ny tafatafa dia azy ihany. Toy izany koa tamiko sy ny naotiko 5% avy amin'ny LinkedIn. Na dia fantatro aza fa stat tsy dia marihina (tsy azoko * fa * fijerin'ny maro) dia voatery nibitsika momba izany aho! Niala aho.
12 Mey 2013 tamin'ny 4:49 hariva
Mavitrika tokoa aho ao amin'ny LinkedIn ary mikendry ny hampitombo ny tambajotra ihany koa aho. Heveriko fa manazava ny vaovao ary ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia manan-tsaina. Enga anie aho mba nieritreritra an'io. Doug, manana vera ianao dia tsy misy dikany ity. Sakafo tsara ho an'ny eritreritra fotsiny… 1%, 5% na 10% amin'ny 200 tapitrisa dia vondrona lehibe atambatra, eny. Saingy na izany aza, fampahalalana azo raisina. Nisioka ny fanambarako aho… Nihevitra aho fa mahafinaritra izany. Ary amin'ny maha-mpankafy ny varotra sy ny varotra ahy, faly koa aho fa anisan'ny laharam-pahamehana na ara-barotra na varotra. Ary lazaina ny marina, mety nisioka zavatra vitsivitsy izay tsy dia nahaliana loatra aho taloha. Ny resaka natombokao momba an'io dia marketing matanjaka kokoa fotsiny izay nateraky ny fanambaràn'ny LinkedIn tato ho ato an'ireo mombamomba izay nojerena ambony. Heveriko fa mety milalao eo an-tanan'izy ireo mihitsy ianao.
Tena tiako ny fomba fijerinao, mahafinaritra foana ny mahita zavatra amin'ny fomba fijerin'ny hafa. Misaotra anao tamin'ny fanombohana ity dinika ity!
13 Feb 2013 tamin'ny 3:13 maraina
Lahatsoratra tsara. Nahazo mailaka iray aho nampahafantatra ahy fa ao anatin'ny 5% aho ary nalaina tampoka - ireo teboka ireo dia nifanaraka tamin'ny eritreritro. Na dia takatro aza ny marketing any aoriany, ny zava-misy dia ny fanaovana ny marina no zava-dehibe kokoa noho ny fiezahana hahatonga ny mpampiasa hahatsapa ho mafana sy manjavozavo ao anatiny.
14 Mey 2013 tamin'ny 6:13 hariva
Malahelo, Doug! Nahatsiaro ho niavaka tamin'ny tenako fotsiny aho.
14 Mey 2013 tamin'ny 6:23 hariva
@ facebook-1728428996: disqus Mbola manokana ianao Mike! Toy ny olon-drehetra 🙂
18 Mey 2013 tamin'ny 7:16 hariva
Ianao (sy ny tenako) dia tsy isan'ireo voalohany% mpikambana LinkedIn.
Ianao dia ao amin'ny mombamomba 1% be mpijery indrindra amin'ireo mpikambana, mombamomba ny duplicate, olona izay niditra indray mandeha ary nanadino izany, olona maty, mpisoloky, mpisoloky ary spam.
Saingy, very maina daholo isika ka nozarainay. Tsara ho antsika!
20 Mey 2013 tamin'ny 1:41 hariva
Tiavo ny T-shirt. Tena mamintina ny media sosialy amin'ity taona 2013 ity.